नेपालको भूराजनीतिक अर्थ सम्बन्ध र सुरक्षा सबाल | Khabarpato
शेयर बजार पर्यटन कृषि कर्पोरेट
नेपालको भूराजनीतिक अर्थ सम्बन्ध र सुरक्षा सबाल
काठमाडौं, बैशाख २३, २०७९
डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
भूराजनीति भनेको भूगोल र राजनीतिको मिश्रित सम्बन्ध हो भने भूराजनीतिक अर्थ सम्बन्ध भनेको भूराजनीतिको माध्यमबाट अर्थराजनीतिमा आउने पारिस्थितिक सम्बन्ध हो । भूगोल परिवर्तन हुँदैन तर राजनीति परिवर्तन हुन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक नीति र अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ । छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा आफ्नो देशको विदेश नीति र अर्थ नीतिमा पनि प्रभाव पार्छ । खासगरी तेस्रो विश्वका देश अथवा गरिब देश भनिने हाम्रो जस्ता मुलुकमा पनि यसले असर पारिरहेको छ ।
विश्वशक्तिमा देखिएको ध्रुवीकरणलाई सन्तुलनमा राखेर विदेश नीति समयानुकूल अद्यावधिक गरिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सङ्कट पैदा हुन्छ । अझ हामी जस्तो कम विकसित राष्ट्रका लागि भूराजनीतिको सम्बन्ध भन्दा पनि भूराजनीतिक अर्थ सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भूराजनीतिले विदेश नीतिलाई मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक नीतिलाई पनि प्रभावित तुल्याउँछ । परराष्ट्र नीतिले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका पक्षलाई प्रभावित पार्ने हुनाले भूराजनीतिलाई विदेश नीति र आर्थिक नीतिसँग सन्तुलन कायम गराउनु राजनीतिक पार्टी र सरकारको दायित्व हो ।
विदेश वा परराष्ट्र नीतिमा मुख्य ध्यान दिने कुरा के हो भने विश्वशक्तिको चलखेल हुँदा नेपालको अस्तित्वमा स्कट पैदा हुने स्थिति निर्माण हुनबाट जोगिनुपर्छ ।
कुनै पनि देशको अस्तित्व राष्ट्रियतामा झल्किने गर्छ । राष्ट्रियता भनेको कानुनी वा संवैधानिक क्रियाकर्ममा सीमित हुँदैन । राष्ट्रियता भनेको भूगोल, त्यस भूगोलका जनता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, धार्मिक सांस्कृतिक भाषिक परम्परा एवं कला, इतिहास, भौगोलिक सम्पदा आदि सबैको समष्टि रूप हो । राष्ट्रियताको आधार भनेको चाहिँ राष्ट्रिय अस्तित्व नै हो । विदेश नीतिको सानो गल्तीले राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा भूराजनीतिक सन्तुलनमा खेलवाड गर्नुहुँदैन ।
सरकारले अपनाएका आन्तरिक राज्य व्यवस्थाका शासकीय स्वरूप र राज्य सञ्चालकका नीति र कार्यक्रमहरूले देशको आन्तरिक पक्षलाई निर्देशित गर्छ भने विदेश नीतिले बाह्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव वा दुष्प्रभावलाई निर्देशित गर्छ । तर, नेपालको हकमा आन्तरिक राज्य सञ्चालन पनि विदेशी प्रभावबाट निर्देशित भएको देखिन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक राजनीतिमा रुमलिरहेका छन् । यहीबेला एसियामा अमेरिका, रुस, चीन र भारतका बीचमा भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले दीर्घकालीन असर पार्ने द्वन्द्व विकसित भइरहेको छ । नेपालको आर्थिक बजार, सामुन्द्रिक पहुँच र आपूर्ति प्रणाली बजारका दृष्टिले भारतसँग अत्यन्तै निकट छ भने उत्तिकै नजिकको छिमेकी मुलुक चीनसँग बजार निर्भरता भारतको भन्दा कम भए पनि राज्य व्यवस्थाका प्रणाली र प्रभाव हेर्दा चीनसँगको सम्बन्ध भारतभन्दा कम छैन ।
विश्वको सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक बहाव कस्तो छ ? छिमेकी राष्ट्र र मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन कस्तो विदेश नीति चाहिएला भन्ने कुरा नेपालको भूराजनीतिक अर्थ सम्बन्ध र विदेश नीतिमा परेनन् वा परे पनि कार्यान्वयन गरिएन । व्यक्तिगत र पार्टीगत पहुँचको आधारमा कसले बढी माग्ने वा डलरमा ऋण लिने भन्ने होड चल्न थाल्यो । सरकारको वार्षिक बजेट नै डलरमुखी हुने निरन्तरता कायम रह्यो ।
भूराजनीति र विदेश नीति सँगसँगै अघि बढ्ने कुरा हुन् । नीति फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी फेर्न सकिँदैन । नेपालले भने विदेश नीति अवलम्बन गर्दा भूराजनीतिलाई यथेष्ट ध्यान दिएको देखिँदैन । वर्तमान नेपाली समाज माओवादी द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रिया हुँदै २०७२ सालको संविधानअनुसार अगाडि बढेको छ । नारा बनेको छ- समृद्धि । नारा जे भए पनि समृद्धि कसरी सम्भव छ भन्ने ठोस योजना अहिलेसम्म कुनै दलले प्रस्तुत गरेका देखिँदैन ।
नेपालको राजनीतिसँग जोडिएको अर्थ संरचना हेर्दा २०१३ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ । २०४६ सालपछि त नेपालमा उदारवादले जरै गाड्यो । उपभोगमा आधारित आर्थिक नीतिले जति उपभोग गरिन्छ, त्यसैका अनुपातमा आर्थिक स्थिति चलायमान हुन्छ भनेर योजना बनाउँदासमेत उपभोगमा जोड दिइयो । श्रम निर्यात गरेर खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री आयात गर्न थालियो । नेपाली समाज विदेशी वस्तु र सेवामा निर्भर हुने स्थिति बन्यो ।
विदेशी वस्तु आयात गर्दा भन्सार महसुलले सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुने नै भयो । यसैले उपभोगवादी अर्थ नीतिले प्रश्रय पायो अनि उपभोग्य वस्तु सत प्रतिशत जस्तो आयातमा निर्भर रह्यो । उद्योगबाट हुने आम्दानी धराशायी भएपछि देशको आर्थिक बजेट नै विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर हुन थाल्यो । २०६०/२०६१ सालमा सरकारी खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ दशमलब ४ प्रतिशत थियो । २०७६/२०७७ सालमा सरकारी खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ दशमलब १ प्रतिशत पुग्यो ।
नेता र मन्त्रीको व्यक्तिगत पहुँचका आधारले बजेटमा अनुमानित वैदेशिक सहायताको रकम राख्ने गरिएको छ । भनेको बेलामा उक्त बाचाअनुसारको पैसा आउँदैन अनि त्यो पैसा पाउने लोभमा दाताले जे शर्त राखे पनि मान्न तयार हुन्छन् । यसरी देशैपिच्छे व्यक्तिगत र पार्टीगत सम्बन्धका आधारमा फरकफरक किसिमका शर्त राखेर सम्झौता गर्छन् ।
स्थिति गम्भीर बन्दै छ । वर्तमान नेपाली राजनीति विदेशी शक्तिबाट परिचालित भएको अवस्था छ । माओवादी द्वन्द्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको अभाव र आपराधिक प्रवृत्ति अनि जनताको प्रतिकार धान्न नसकेर विदेशी शक्तिराष्ट्रले १२ बुँदे समझदारी गराए । यही आधारमा अन्तरिम संविधान निर्माण भयो ।
युरोपियन युनियन सम्बद्ध राष्ट्रहरूले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र पहिचानमा आधारित जातीय राज्यका पक्षमा पैरवी गर्न माओवादीलगायत अन्य राजनीतिक शक्तिहरू र आमसञ्चार माध्यमलाई समेत लगानी गरे । विदेशीसँग ऋण लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शासन, देशको आर्थिक क्षमताले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने संघीयताले गर्दा देशले अवलम्बन गरेको राजनीतिक पद्धति र शासकीय स्वरूप नै ढलपलको अवस्थातिर लम्कँदै छ ।
हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति अर्थात् डलर सञ्चिति कमजोर भइरहेको छ । विदेशी डलरको स्रोत भनेको श्रम निर्यातबाट आउने विप्रेषण नै हो । वैदेशिक लगानी, वस्तु निर्यात र पर्यटन आदिबाट आउने पैसो नगन्य छ । तर, ठूलो मात्राका विदेशी ऋण र व्याजको भुक्तानी एवं डलरमा वस्तु र सेवा आयात गरेर व्यवहार चलाउनुपरेकाले नेपाली अर्थतन्त्र मुन्टो उठाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्न लागेको छ ।
हुँदाहुँदा सरकारले कुन मन्त्रालय वा विभाग स्थापना गर्ने भन्ने कुरा पनि विदेशी दाताको आदेशानुसार गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । संविधानअनुसार कानुन बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । नेपालमा कानुन मन्त्रालय पनि छ तर विश्व बैंक र एडीबीसँग ऋण लिएर नागरिकता कमजोर बनाउने राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विभाग जस्ता कार्यालय स्थापना भइरहेका छन् । त्यसका लागि चाहिने ऐन पनि विदेशी सहयोगमै बन्छ ।
प्रथमतः देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन खाना नाना र दबाइमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कृषिप्रधान देश नेपालमा ३ महिनामा ७ अर्बको फलफूल र तरकारी आयात हुन्छ । तत्काल निर्यात बढाउन नसके पनि खाना र कपडामा आत्मनिर्भर हुन सके विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या पर्दैन । दबाइ र इन्धनलगायतका कुरामा वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता क्षेत्रहरूबाट सहयोग लिन सकिन्छ । यसले बाह्य मुलुकसँग सहायता र व्यापार क्षेत्र दुवैमा बराबरको नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
परराष्ट्र नीति, २०७७ ले परराष्ट्र नीतिका १४ वटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त राखेको छ तर तेस्रो नम्बरको पञ्चशीलको सिद्धान्त र पाँचौँ नम्बरको असंलग्नताको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा बाधित भएका अवस्था छ ।
दक्षिण एसियामा भारत, चीन र अमेरिकाले गहिरो गरी नियालेको अवस्था छ । यी तीनै मुलुकले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा चासो राख्छन् । उत्तर नजिक भए दक्षिण र अमेरिका रिसाउने र दक्षिण नजिक भए अमेरिका खुसी हुने तर चीन रिसाउनेजस्ता सतही कुरा गरेर राजनीतिक शक्तिहरू त्रसित हुन्छन् । दुवै वा तीनै शक्तिलाई समदूरीमा राखेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो तर यस्तो हुन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय विश्वशक्ति बहुध्रुवीय छ । नेपाल एक ध्रुवीय पद्धतिमा लागेर संविधानमा लेखिएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिसमेत अवलम्बन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । यसले गर्दा नेपालको भूराजनीतिसँगै भूराजनीतिक अर्थ सम्बन्ध र सुरक्षा चासोसमेत जोखिममा परेको छ ।
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार
भारतीय प्रधानमन्त्री माेदीकाे भ्रमणले लुम्बिनी क्षेत्रका बजार बन्द
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई लिएर लुम्बिनीका अधिकांश पसल व्यवसाय बन्द ग…
तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका श्रीप्रसाद श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । …
देउवा र मोदीले गरे ‘बुद्धिस्ट कल्चर एण्ड हेरिटेज सेन्टर’को शिलान्यास
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज लुम्बिनीमा इण्डिय…
टस जितेर युगान्डाविरुद्ध बलिङ गर्दै नेपाल
युगान्डाविरुद्धको पहिलो टी- २० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालले टस जितेर बलिङ गर्ने भएको …
चुनावका मुखमा केपी ओलीका झूटका चाङ
केदार सुवेदी जति ठूला दल र नेता, त्यही मात्राको झूट बोल्दा रहेछन् भन्ने सत्य स्थानीय न…
डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा भूराजनीति भनेको भूगोल र राजनीतिको मिश्रित सम्बन्ध हो भने भूर…
कम्युनिस्टका ध्वजावाहक कांग्रेस
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेताहरूमा असीमित अहंका…
एमालेको अनुहारमा स्थापितको दाग
यस पटक महानगर काठमाडौंको प्रमुख पदका लागि पार्टीको उमेदवार चयन गर्ने सन्दर्भमा नेकपा…
खबरपातोडटकम हाम्रो समाज, राष्ट्र र विश्वमा भइरहेका मानवीय चासो र रुचिका घटना, गतिविधि र विचार संप्रेषण गर्ने डिजिटल प्लेटफर्म हो । खबरपातोडटकमले प्रस्ट भनेको छ- निष्पक्ष समाचार, तटस्थ विचार । खबरपातो समाजमा भइरहेका नकारात्मक गतिविधिमा खबरदारी र सकारात्मक कामलाई प्रोत्साहन गर्न सचेत छ । यसले तपाईँको सूचना तथा... सबै
प्रधान कार्यालय : काठमाडौं महानगरपालिका, अनामनगर
कन्दरा पब्लिकेसन एण्ड प्रिन्टिङ सपोर्टद्वारा संचालित
सम्पादक : जी. अत्री
English Edition Editor : Nilam Kumar Ojha
कागेश्वरी मनोहरा- ८, काठमाडौं
मोबाइल : ९८४१४३३१२८
विज्ञापनका लागि : ९८१३३७८२९०
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.- २५८५/२०७७/०७८
प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण: च नं. - ११६७/२०७७/०७८
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय कम्पनी दर्ता नं.- ११३८७५/२०६९/०७०